merolagani - लगातार घटेको सुनचाँदीको मूल्य मंगलबार वृद्धि, ताेलाकाे कति ?
लगातार घटेको सुनचाँदीको मूल्य मंगलबार वृद्धि, ताेलाकाे कति ?
Jan 12, 2021 12:56 PM Merolagani
लगातार घटेको सुनको मूल्य फेरि वृद्धि भएको छ । सुन २८ गते, मंगलबार सुन तोलामा ६०० रुपैयाँले बढेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजार ८०० रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन ८०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९३ हजार रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
यसैगरी मंगलबार चाँदीको भाउ पनि उकालो लागेको छ । यस दिन चाँदी तोलामा २० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला एक हजार २५० रुपैयाँमा किनबेच हुँदैछ । सोमबार चाँदी ४० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला एक हजार २३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।